Ndị na-emepụta igbe eletriki eletriki & ndị na-eweta |Ụlọ ọrụ igbe ọkụ eletrik nke China
Otu& Igbe Mita Atọ Atọ
HLRM-S1/PXS1 mepụtara Holley Technology Ltd., nke a na-eji maka otu / atọ mita mita ma nwee njirimara nke mgbochi uzuzu, mmiri na-eguzogide, UV, ọkwa ọkụ na-ere ọkụ na ike dị elu.Enwere ike iji PC, ABS, Alloy or Simple metal mee ya.HLRM-S1/PXS1 na-anabata ụzọ nrụnye abụọ nke na-eji eriri igwe anaghị agba nchara na Screwing, nke dabara maka mkpanaka telegraph na ntinye mgbidi n'otu n'otu.
Igbe Mita Otu Oge
HT-MB otu akụkụ mita igbe arụpụtara site Holley Technology Ltd. dị ka ọkọlọtọ IEC62208, ọ na-enye otu oge oghere maka mita nwụnye, C ụdị akpaka sekit breaker, reactive capacitor, Y ụdị voltaji ndekọ.
A na-eme ihe mkpuchi nke polycarbonate doro anya, a na-emekwa ahụ nke polycarbonate iji nye ya mmetụta dị elu, nke nwere mmetụta dị elu nke mkpuchi mkpuchi, ọkụ ọkụ, nkwụsị ultraviolet, ihu igwe dị ụtọ, enyi na gburugburu ebe obibi.
Igbe DIN Rail Mita nke Otu&Atọ Atọ
PXD1-10 / PXD2-40 mepụtara Holley Technology Ltd., nke a na-eji 1 / 4 otu oge DIN Rail mita ma nwee njirimara nke mgbochi uzuzu, mmiri na-adịghị, UV na-eguzogide, nnukwu ọkụ-retardant ọkwa na ike dị elu.PXD1-10/PXD2-40 na-anabata ụzọ nrụnye abụọ nke na- Hooping na eriri igwe anaghị agba nchara na screwing, nke dabara maka mkpanaka telegraph na ntinye mgbidi n'otu n'otu.
Igbe Meta Ụdị Eletriki Ekewara
Emepụtara PXD2 site na Holley Technology Ltd., nke a na-eji maka otu na otu mita atọ ọnụ ma nwee njirimara mgbochi uzuzu, mgbochi mmiri, mgbochi UV, elu.
ọkwa ọkụ na-egbochi ọkụ na ike dị elu.PXD2 na-anabata ụzọ nrụnye abụọ nke na-eji eriri igwe anaghị agba nchara na Screwing, nke dabara maka mkpanaka telegraph na ntinye mgbidi n'otu n'otu.